> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ Photos si Blackberry ọwa
Gịnị mere ehichapụ foto & video nwere ike natara site Blackberry ọwa
Ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị na ndị na foto na vidiyo na mberede ehichapụ ha Blackberry ọwa nwere ike Ewepụtara. N'ezie, mgbe ị na-ihichapụ foto ma ọ bụ vidiyo, ha na-agaghị n'ezie arahụ, ma naanị ibu-adịghị ahụ anya, na ebe ha na-arụ na-akara dị ka oghere na maka ọhụrụ faịlụ. Dị ka ogologo oge dị ka ebe na-adịghị reused site ọhụrụ faịlụ, e nwere ihe a ezi ohere ka i nweta ha niile azụ na efu àgwà ọnwụ.
Olee otú naghachi foto & vidiyo si na site Blackberry ọwa
Adịghị ewere ya dị ka a nnọọ ike ọrụ naghachi ehichapụ foto na vidiyo si Blackberry ọwa. Ka a okwu nke eziokwu, ihe niile ị chọrọ bụ a Blackberry ọwa foto mgbake ngwá ọrụ, nke nwere ike inyere gị aka ịchọta azụ ndị niile ehichapụ faịlụ. Ka na-adịghị enwe ihe echiche? Ebe a bụ nkwanye: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac. Nke a foto mgbake omume-enye gị ohere iji naghachi Blackberry ọwa foto na vidiyo, n'agbanyeghị na ị na ihichapụ ma ọ bụ usoro ha. Ọ na-ewe 3 mfe nzọụkwụ.
Gbalịa free ikpe mbipute a Blackberry ọwa foto mgbake software ugbu a. Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị.
Step1. Jikọọ gị Blackberry ọwa na kọmputa
Tupu eme ihe ọ bụla ọzọ, i kwesịrị jikọọ ekwentị gị na kọmputa. Ị nwere ike ịhọrọ iji a dijitalụ USB jikọọ dum ekwentị, ma ọ bụ jiri a kaadị agụ ijikọ kaadị ebe nchekwa. Ma nke ha na-arụ ọrụ nke ọma. Mgbe ahụ na-agba ọsọ ihe omume ị na-na na arụnyere na kọmputa gị. Ebe a ka na-agbalị na Windows version. Pịa "Malite" na-amalite Blackberry ọwa faịlụ mgbake.
Step2. Iṅomi foto & video na gị Blackberry ọwa
Ọzọ, họrọ mbanye ụzọ gị Blackberry ọwa na pịa "iṅomi" chọpụta niile ehichapụ faịlụ gị Blackberry ọwa.
Step3. Naghachi ehichapụ foto & vidiyo si na Blackberry ọwa
Ị na-na na ikpeazụ nzọụkwụ ugbu a. Ebe i nwere ike ịhụchalụ na ego niile recoverable faịlụ. Akara ndị ị chọrọ azụ na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Blackberry ọwa ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Video nkuzi nke Blackberry ọwa mgbake
Top 5 Free iCloud ndabere extractor
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi na Motorola Droid Razr